စက်ရပ်သတင်း။။ချေး၇ထပ်ချွတ်လို့ ကိုကြီးစေးထူး ရေချိုးပြီးသကာလမှာ အိမ်ရှေ့ရှိမြောင်းများ ရေစီးရေလာမကောင်းပဲ ပိတ်ဆို့သွားကြောင်း အဟိ :P
Oct 16, 2007, 11:54:00 PM
ဒီလူကြီး မကြီးမငယ်နဲ့ ရေချိုးခန်းထဲ ရေ၀င်ဆော့နေတာထင်ပါရဲ့။
ပုံကို သေချာကြည့်တော့ ဗူးတွေကလည်း အခွံတွေချည်းပါလား။
ဂျီးတွေပြောင်အောင် တွန်းရဲ့လား သားကြီး :P
တကယ်ရေချိုးပြီးပလား … မှန်းစမ်း နမ်းကြည့်ရအောင် …
ဟင် .. ညှီစို့စို့နဲ့ပါလား …. ဟားဟားဟား …
Oct 17, 2007, 4:11:00 AM
တချို့က ရေမချိုးမှ ပိုကြိုက်သတဲ့ …
နပိုလီယံဆို … သူစစ်ထွက်က ပြန်ရောက်ခါနီးရင် သူ့မိန်းမကို ရေမချိုးဘဲနေခိုင်းတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ရေမချိုးတဲ့ ရနံ့ကလေးက တယ်သင်းဆိုပဲ … ။
Oct 17, 2007, 4:15:00 AM
"မှန်ရှေ့တွင် ရပ်ကြည့်မိပြန်တော့ ရေစိုဆံပင်တွေ ဖွာရရာ ကျလျက်သား လူတယောက်ကို နွမ်းနယ်ဟန် ကင်းစွာ တွေ့လိုက်ရသည်။" Is he naked? :) :)
Oct 17, 2007, 6:46:00 AM
Oct 17, 2007, 6:59:00 AM
ကိုစေးထူးရေ.. လာလည်သွားတဲ့အတွက်ရော၊ comment အတွက်ရော ကျေးဇူးပါဗျို့... နောင်လည်း လာလည်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ :)
အဟဲ.. မှတ်တာမမှားဘူးဆိုရင် မနက်က ဒီကို ရောက်လာတုန်းက ဓာတ်ပုံမတွေ့မိသလိုပဲ.. :D
Oct 17, 2007, 10:32:00 AM
အားပေးထားကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့။ ကိုလွင်မိုးကတော့ ကြံကြံဖန်ဖန်မေးတော့မယ်။ အဟဲ။ :D
မနုစံ ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော် ပထမတော့ ဒီတိုင်းတင်မိတာ။ နောက်မှ ပုံထည့်ဖို့ မေ့နေတာကို သတိရလို့ ပြန်ထပ်တင်လိုက်တာပါ။ :) နောက်ထပ် ပို့စ်တွေကိုလည်း ရေ၀ိုင်းချိုး၊ အဲ … အားပေးကြပါအုံး။ :P